के हो औलो, कसरी बच्ने ? « Mero LifeStyle
ट्याङ्कर चालकको चेतावनी : रोके पेट्रोलियम ढुवानी
रक्तदान गर्नेहरुको संख्यामा कमी, नेपालमा दैनिक कति रगत चाहिन्छ ?
के शारीरिक सम्बन्धबाट कोरोना सर्छ ?
खोटाङ र मनाङबाट ७५ जिल्लाले सिक्नुपर्छ यी कुरा !
वर्षेनी बढ्दै सर्पदंशका बिरामी : देशभर कहाँ-कहाँ हुन्छ उपचार ?
पत्रकार महासंघ बेलायतको अध्यक्षमा ध्रुवराज अर्याल विजयी
के हो कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम, के हुन् लक्षण, कसरी बच्ने…
खोप उपलब्ध नगराए हड्ताल गर्ने अखिल नेपाल औद्योगिक मजदूर संघको…
पुरुष प्रेग्नेन्ट हुँदा देखिन्छन् यस्ता लक्षण
के हो औलो, कसरी बच्ने ?
कृष्ण वाग्ले	|| 25 April, 2021
एनफिलिज जातको पोथी लामखुट्टे अथवा सङ्क्रमित लामखुट्टेको टोकाईबाट औलो सर्छ । यो जातको लामखुट्टेको विकास विशेषगरी पानी जमेको ठाउँमा हुने गर्छ । आज अप्रिल २५ ‘शुन्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौं’ भन्ने नाराका साथ संसारभर विश्व औलो दिवस मनाइदैछ । नेपालमा सन् १९८० को दशकमा महामारीको रुपमा रहेको औलो पछिल्लो समय निवारण उन्मुख रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तैपनि औलोको जोखिम भने कायमै छ । यहाँ हामीले औलोका लक्षण र बच्ने उपायका बारेमा चर्चा गरेका छौं ।
– ज्वरो आउनु
– जाडो अनुभव हुनु
– काम ज्वरो आउनु
– अत्याधिक पसिना आउनु
– टाउको दुख्नु
– बान्ता हुनु
– शरीर दुख्नु
औलोबाट बच्ने उपाय
औलोको शंका लागेमा यसको निदानका लागि रगतको जाँच गर्नुपर्छ । यदि कोहि व्यक्ति औलो संक्रमण क्षेत्रबाट भर्खरै आएको छ र उसलाई ज्वरो आएको छ भने अनिवार्य जाँच गर्नुपर्छ । यो रोगको पहिचान भएपश्चात भने नेपाल सरकारले धरै अघिदेखि निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको औषधिको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।
समयमै निदान भएर उपचार हुने हो भने यो रोग पुर्णरुपमा निको हुन्छ । यो रोग लाग्नबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नु नै हो । त्यसका लागि लामखुट्टे वृद्धि विकास हुन नदिन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, यसबाट बच्नका लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
– झुल हालेर सुत्ने
– लामखुट्टे भगाउने रसायनको प्रयोग गर्ने
– घर वरपरका पानी जमेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने
– लामखुट्टेका लार्भा मार्ने किटनाशक औषधिको प्रयोग गर्ने
– बाहुला भएका कपडा लगाएर बस्ने
(डाक्टर शेर बहादुर पुनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
बर्खा सीजन सुरु भएको छ । यस सीजनमा झाडापखाला, फूड पोइजन जस्ता रोग खानापानको असन्तुलनलेका कारणले देखापर्छ । बर्खामा हुने
दोस्रो लहरको कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा रहेर सेवा दिइरहेकाहरु उच्च जोखिममा छन् । विषम परिस्थितिमा सेवामा खटिरहेका पेट्रोलियम व्यवसायी पनि त्यसैमध्येमा
आज विश्व रक्तदाता दिवस, नेपालमा पनि रक्तदान लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । यस वर्ष सेवाले रक्तदान गरौँ र
गृह मन्त्रालयका अनुसार ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा एक महिना भन्दा बढी कोरोना भाइरस लक्षित निषेधाज्ञा छ । तर, पूर्वको खोटाङ
कस्ता सामानबाट कोरोना सर्छ ?
के कोभिड-१९ को खोप लगाएपछि शरीर चुम्बकीय बन्छ
महिलाले पुरुषसँग बिस्तारामा के चाहन्छन् !
सुनसान पोखरामा साइबेरियन बकुल्लाले थपेको रौनकता (फोटो फिचर)